Dystonia, izimpawu kanye nokwelashwa
Iziguli eziningi ukuzwa uphethwe "IRR", Angazi ukuthi yini lesi sifo futhi indlela yokuphatha kulo. Lapha sinikeza impendulo yalowo mbuzo futhi akuchazele ukuthi lokhu dystonia.
Izimpawu zayo kungaba efana izimpawu ezinye izifo. Kodwa IRR akusona isifo - a syndrome evelayo ngenxa yikuphi ukwephula nempilo yabantu, noma kungaba ukukhathala elula noma ukugula okungathí sina. Futhi indlela kuphela efanele ukwelapha dystonia - ukubona futhi uqede zonke izimbangela zokuhlupheka ivela khona.
Lokhu syndrome yisimo ukungasebenzi kwekhono autonomic nervous system elawula umzimba kuvumelana kwalo. Ngenxa yokwehluleka ANS ukusebenza umuntu ukushisa exchange ukuhlukumeza, wokugaya ukudla, kwegazi, umsebenzi zokuzala. Dystonia, izimpawu zazo thina uchaze ngezansi, ungase ubone umuntu nganoma isiphi yobudala. Kungaba ukuzibonakalisa unomphela noma ube umlingisi zezinhlekelele (yokufikelwa, ukushaywa uvalo ngaphandle kwesizathu, njll).
Ngakho safunda ukuthi vegetative dystonia, njll ukhulume izizathu nesenzakalo yayo kanye nokwelashwa.
Kungani IRR? Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu we syndrome ukucindezeleka, nezifo zengqondo, izifo yomgogodla wesibeletho, imiphumela ukubheduka we ikhanda nentamo, endocrine neziyaluyalu, izifo ezithathelwanayo, komzimba, izinkinga esiqeshini gastro-emathunjini. izinhlelo eziningi futhi izitho ilawulwe autonomic nervous system uqale ukuba ungabe usasebenza kahle ngesikhathi zokugula ezifana dystonia.
Nezici ezithile ukuze ishayela phansi nomfutho wegazi ophezulu noma hypotension, okusheshayo noma.
ukukhathala okungamahlalakhona, ukungabekezelelani emsebenzini ezinkulu noma isikhathi eside.
Coldness noma ukushisa, kanye isifiso ukuzizwa obupholile, emikhawulweni abandayo, ngamanzi, ukwenyuka okuncane nje kwamazinga nezinga lokushisa komzimba.
Ukwephula isisu namathumbu (kungaba ukuqunjelwa noma isifo sohudo, DZHVP, ubuhlungu spastic).
iziyaluyalu Nervous - okuncane yokukhathala kwemizwa, ubuhlungu bekhanda, ukucasuka, isiyezi, unenkinga, ukungasebenzi ocansini.
isikhumba Ukujuluka noma ezomile.
uvalo, yokufikelwa, ukuquleka, vagoinsulyarnye, sympathadrenalic noma izinhlekelele eziyinkimbinkimbi.
Nge ukuphindaphinda njalo izimpawu ngenhla kufanele kudokotela abangakwazi ukwenza i ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe futhi zibeka ukwelashwa.
Kodwa dystonia, izimpawu okuyizinto edidayo, hhayi nje itholiwe. Ukuze uqinisekise uphethwe kudinga luhlolo kanye nokubonisana ongoti ahlukahlukene: Umeluleki, ophthalmologist, udokotela wezinzwa, udokotela wezifo zabesifazane, endocrinology, wenhliziyo. Ugwema khona yokungenwa yizifo organic babelwa Ngokwalokhu kucwaninga izikhalazo lesiguli kanye nezimpawu. Isiguli kufanele kube ngokuningiliziwe elikhulu ukuchaza imizwa yami ngesikhathi kuhlasela, ukuze bakwazi ukwakha isithombe esinembile kakhulu lesi sifo. Uma uphethwe "VSD" futhi ukuvala amathuba khona udokotela isifo ukuphathwa kwabathintwayo sinquma ukwelashwa ngabanye.
Indlela esiphatha ngayo dystonia vegetative? Okokuqala, kubalulekile ukuba sivumelanise indlela yabo yokuphila: ukwenza ezemidlalo imidlalo, ukuxazulula umsebenzi kanye nokuphumula, ngokuvamile ehamba emoyeni opholile, iya ku imvelo, ushawa Ngokuphambene, balandele yokudla, ukulala amahora ngosuku okungenani eyisishiyagalombili. Abantu nale syndrome Kunconywa ukwelashwa kulesi sibhedlela (izikhungo isiqondiso esithinta izinzwa) Umeluleki Active, Reflexology, aromatherapy massage, Physiotherapy. Lokhu kuyingxenye ebalulekile yokuphathwa, okuyinto, ngeshwa, iziguli eziningi ungathathi sina, okuholela esiya ngokuya siba sibi isimo sabo.
ukwelashwa izidakamizwa VSD siqukethe zinhlungu futhi antidepressant. Umuthi ezinqunyiwe ngamunye isiguli ngasinye kuye isithombe emtholampilo yokugula kwakhe.
Ekwelapheni VSD Futhi liye asebenzisa ngayo ngokuphumelelayo amakhambi nge sine nokuchayeka antidepressant okudambisa ukukhathazeka, ukushintshashintsha ukuzinza, ukuqeda ukuzikhandla ngokweqile engqondo.
Izimpawu komqondo futhi isifo ifomu
Izimpawu zamarabi nezingozi zayo
Eshiswa zamanzi ngaphansi emakhwapheni. Yini okumelwe uyenze?
Laryngitis olunamandla. Izimpawu kanye Ukwelashwa.
Izimpawu ukuxukuzeka e ingane
Decompression ukugula (isifo caisson): Ukwelashwa, izimbangela, izimpawu, zokuvimbela
Ukususa encumbrance ka mortgage Sberbank: imibhalo, izinsuku, ukubuyekezwa
Ungaphendula kanjani futhi nini usike raspberry: Amathiphu ochwepheshe
Kungani umoya ezinganeni. izimbangela
Kuyini inkundla emangalisayo "Central" e Volgograd?
Lapho ukuthenga ijazi noboya eMoscow: ukubuyekeza nezincomo
Ichibi Beloe. Isifunda saseRyazan neparele layo
League of Legends: Umhlahlandlela kuya Akali